Gadziriro ye2018 Cosafa Cup Yotemesa Chidzambwa Musoro
Chivabvu 09, 2018
Gadziriro yemaWarriors ye2018 Cosafa Cup yaita manyama amire nerongo sezvo vatambi vanobva kuEngland vasina magwaro ekufambisa emuZimbabwe sezvinotarisirwa pamutemo.
Murairidzi wemaWarriors, Sunday Chidzambwa, ambomira kudoma chikwata chake chemakundano aya zvichitevera mashoko ekuti vatambi vaari kuda kushandisa kubva kuEngland havana magwaro ekufambisa emuZimbabwe kana kuti mapasipoti ayo anovatendera kuti vatambira chikwata chenyika ichi.
Chidzambwa ari kuda kushandisa muCosafa Cup vatambi avo achada kutambisa pamakundano eAfrica Cup of Nations kusanganisira Tendai Darikwa, Kundai Benyu, Macauley Bonne na Admiral Muskwe.
Asi pari zvino, vatambi ava havakodzere kutambira maWarriors nekuti havana mapasipoti emuZimbabwe asi kuti vane mapasipoti ekuBritain sezvo vakaberekerwa nekukurira kuEngland.
Mumitambo yakakosha seCosafa Cup, Africa Cup of Nations, neWorld Cup, panodiwa mapasipoti enyika anoratidza kuti vatambi vacho zvizvarwa zvenyika iyoyo.
Pavakambouya kuzotambira maWarriors, Darikwa, Benyu, Bonne naMuskwe vakatambira maWarriors mumitambo yekuedzana masimba vachishandisa mapasipoti avo ekuBritain sezvo mitambo iyi isina mitemo nezvisungo zvakawanda.
Maneja wemaWarriors, VaWellington Mpandare, vaudza vatori venhau kuti nyaya yemagwaro ekufambisa inyaya yavanetsa zvikuru zvekuti iri kuvakanganisa gadziriro yeCosafa Cup neAfrica Cup of Nations.
Asi VaMpandare vane basa guru rekuedza kuti vatambi ava vatore mapasipoti emuZimbabwe, ayo anonetsa kushandisa mukufamba.
Mitemo yemuZimbabwe haisati yavandudzwa kuti ienderane nezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika iro rinobvumidza chizvarwa chose chemuZimbabwe kuva nekodzero yekuva nepasipoti yemuZimbabwe kunyange hazvo aine pasipoti yekune dzimwe nyika.
Muna 2012, mumwe mutambi wemuZimbabwe anotamba kuEngland, Cosmos Pritchard, akambouya kuzotambira maWarriors aine pasipoti yekuBritain akarambidzwa kutamba.
Pritchard akaramba kurasa pasipoti yake yekuBritain achitora yemuZimbabwe zvekuti kubvira muna 2012 imomo haana kuzonzwikwa nezvake zvekare.
Chidzambwa ari kuda kushandisa Cosafa Cup kuvaka chikwata chake chichatamba neCongo Brazzaville mumutambo weAfrica Cup of Nations unotevera uyo uriko muna Gunyana.
Pamusoro pezvo, Chidzambwa ari kutarisira zvekare kutora mukombe uyu mushure mekukunda gore rapera apo akapa Zimbabwe mikombe yeCosafa Cup mishanu kubvira makundano aya avambwa muna 1997.
Makundano eCosasa Castle Cup ari kutanga musi wa 27 Chivabvu kusvika musi wa 9 Chikumi.